Yuusuf Dabageed oo xilka laga qaaday | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Yuusuf Dabageed oo xilka laga qaaday
Yuusuf Dabageed oo xilka laga qaaday
Wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa xilkii looga qaaday Guddoomiyaha Gobolka Hiiran.
Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Cali C/laahi Cosoble ayaa xilka ka qaadistan shaaciyay goor dhowyed iyadoo Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Yuusuf Dabageed) laga qaaday xilkii maamulka Gobolka.
Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Hiiraan ayaa loo magacaabay Cali Jeyte Cismaan oo hore u soo noqday xildhibaan dowladii KMG ahayd iyo wasiir ku xigeen.
Xil ka qaadista Yuusuf Axmed Xagar Dabageed ayaa la sheegay inay salka ku hayso awood qeybsi qabiil iyadoo aanay suuragal ahayn in Jufo ka mida beesha madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle ay haayaan xilka guddoomiyaha Gobolka Hiiraan.
Waxaa kaloo dhowaan lagu wadaa in isbedel kale lagu sameeyo maamulada gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe si loo miisaamo beelaha labada gobol kadib dhismihii maamul Goboleedka Hirshabeelle, sida wararku ay sheegayaan.
Previous articleMaxaad ka taqaanaa Maxkamadda ICC iyo ololaha ka dhanka ah oo Africa ka socda
Next articleRuushka 26 qof ku dilay Suuriya